Mgbe-sales service & Ileba - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
Mgbe-Sales Service & Ileba
Nye onyinye site n'iji ntuziaka na nduzi.
1 Afọ akwụkwọ ikike oge. Mgbe ngwaahịa na-natara, ahịa nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka mgbe-ire ọrụ ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ngwaahịa ama enen ke ama ọkọbọ, ma nwere ndidi nsogbu n'oge ojiji, anyị nwekwara ike na-enye free mmezi, ahịa mkpa ịkwụ ụgwọ maka nnyefe na-eri.
N'ihi ọdịdị nke ibu, naanị klas F2 / M1 ma ọ bụ n'okpuru nwere ike ịbụ 2nd calibrated.
Onye ahia anyi mara nma zutara uzo gwongworo mgbochi zigara anyi foto ya na ngwongwo anyi. Daalụ maka ntụkwasị obi ya na nzaghachi ya.
* Mmezi arọ maka mmiri mita
A na-ejikarị mita mmiri eme ihe na laabu ma ọ bụ usoro mmepụta nke chọrọ ịlele ọdịnaya mmiri ngwa ngwa. Dị ka ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ọrụ ugbo wdg.
Esi calibrate nke mmiri mita na ibu ibu?
Nọgidenụ pịa bọtịnụ ZERO n'oge steeti 0.00g.
Mgbe ihuenyo ahụ na-enwu, tinye nwayọọ 100g na tray sample ahụ nwayọ. Uru ahụ ga-ere ọkụ ngwa ngwa, cherezie ruo mgbe agụmagụ kwụsịrị na 100.00.
Wepụ ibu ahụ, laghachi iji nwalee ọnọdụ, a na-eme usoro mmezi ahụ.
Ekwesiri ighota mmiri ohuru ohuru tupu ojiji. Mgbe a na-ejikarị ya eme ihe mgbe niile, mgbe ahụ, ọ dịkwa mkpa ịdị na-arụ ọrụ ugboro ugboro. Ka ịhọrọ oke nha dị ka eziokwu nke mita mmiri maka mmezi dị mkpa. Nweta ndụmọdụ ebe a.
* Mmezi arọ maka electronic akpịrịkpa
N'ozuzu, a ga-eji akpịrịkpa elekere elekere elekere elekere 1/2 ma ọ bụ 1/3 nke ọnụ ọgụgụ zuru ezu. Usoro mmezi ọkọlọtọ dị n'okpuru:
Gbanye akpịrịkpa, kpoo ahụ ọkụ maka nkeji iri na ise, wee tụọ obere bit 0. Mgbe ahụ jiri igwe iji dozie ya na usoro, dịka 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 5kg, debe agụpụta ka ọ bụrụ otu ibu ibu, a na-eme usoro mmezi ahụ.
Akpịrịkpa dị iche iche ga-achọ klaasị dị iche iche:
Itule na 1/100000 ndidi na kacha nta ọnụ ọgụgụ 0.01mg bụ kacha mma larịị itule. Ọ kwesịrị ka calibrated na E1 ma ọ bụ E2 igwe.
Iguzozi na 1/10000 ndidi na opekata mpe 0.1mg ga-eji oke E2 mee ihe.
Itule na 1/1000 ndidi na kacha nta ọnụ ọgụgụ 1mg ga-eji E2 ma ọ bụ F1 igwe calibrate.
Itule na 1/100 ndidi na kacha nta ọnụ ọgụgụ 0.01g ga-eji F1 igwe calibrate.
N'ihe na 1/100 ndidi na obere 0.1g ga-eji M1 igwe mee ihe.
Enwere ike idozi akpịrịkpa na nha site na uru kwekọrọ na klaasị ha.
* Elevator na-ebu ule
Ọ bụ a nkịtị usoro maka mbuli loading ule. Ihe nyocha nke itule nke igwe mbuli kwesịkwara iji ibu. Ihe itule nke mbuli elu bụ otu ihe dị mkpa kachasị mkpa nke igwe mbugharị traction ahụ, yana oke dị mkpa maka nchekwa, ntụkwasị obi, nkasi obi na ike nke igwe mbuli. Dị ka ọrụ dị mkpa, a na-etinye ule nke itule na ọrụ nyocha nnabata. 20kg nkedo ígwè igwe "akụkụ anọ dị arọ" (M1 OIML ọkọlọtọ igwe) na 1g ndidi na-eji elevator nnyocha. N'ozuzu, ụlọ ọrụ mbuli ga-eji obere ihe igwe nwere site na 1 ton ruo ọtụtụ tọn.
Lọ ọrụ nyocha akụrụngwa pụrụ iche ga-ejikwa ihe igwe eji eme ihe maka nyocha elevator. The nkịtị nha bụ: 20KG nkedo ígwè (adaba maka kemfe, mfe iji bulie), na abuo ụfọdụ nnyocha nkeji ga-ahọrọ 25kg igba ígwè ụdị.
* Nhazi nke oke ọrụ dị arọ / akpịrịkpa
* Usoro mmezi
Nhazi na nkuku: Họrọ ibu na 1 / 3X uru (X karịa ikike zuru oke nke weightbridge), tinye ya n'akụkụ anọ nke ikpo okwu wee tụọ iche iche. Ntugharị nke akụkụ anọ enweghị ike ịnwe ndidi.
Nhazi mmezi: Họrọ oke na 20% X na 60% X, tinye ha na etiti nke iche iche. Mgbe ị gụchara ọgụgụ akwụkwọ ahụ na uru igwe dị, ntụgharị ahụ agabigaghị anabata ndidi.
Usoro mmezi: Họrọ ọnụọgụ 20% X na 60% X, debe ụkpụrụ dị n'etiti etiti tebụl na-ebu ibu, tụọ iche, ma a ga-atụle ọgụgụ ahụ na ogo ọkọlọtọ. Ntughari ahụ ekwesịghị ịgafe njehie ekwe.
Ngosipụta mmezi uru: Nkezi ike itu ikike n'ime 10 hà akụkụ, setịpụrụ ụkpụrụ bara uru dị ka ya, na-etinye ọkọlọtọ arọ na etiti nke weightbridge, mgbe ịdekọ agụ.
* Mmezi nke akpịrịkpa anụ ụlọ
A na-eji akpịrịkpa anụ ụlọ tụọ anụ ụlọ. Iji mee ka izi ezi ha sie ike, enwere ike iji ihe ọ̀tụ̀tụ̀ iron mee ka akpịrịkpa anụ ụlọ gbanwee.
* Pallet akpịrịkpa
Ejikọtara ya na pallet aka na akpịrịkpa ọnụ. Site na akpịrịkpa pallet, a na-ebugharị ma na-eri ihe n'otu oge. Mee ka arụ ọrụ ụlọ gị rụọ ọrụ nke ọma na ọnụ ala.
* Crane akpịrịkpa
A na-eji akpịrịkpa kreenu mee ihe maka ịtụle ibu, nke dị iche iche na ịdị arọ dị iche iche, na-enye azịza maka nsogbu a ka esi tụọ ibu buru ibu na-enweghị atụ n'okpuru ọnọdụ ụlọ ọrụ A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ nke igwe, ọrụ ọla, ụlọ mmepụta ihe, ebe a na-egwupụta akụ, ebe a na-ebu ibu, ngwa ngwa , ahia, ulo akwukwo, wdg, dika ibudata, nbudata, njem, ihe ndi ozo, mmezi, wdg. Ihe oru ndi mmadu ji eme ihe di iche iche di na 100kg ruo 50tonne
Akara Calibration Weight, Shear Bead Ibu Ibu, Mmezi arọ Set, Akwụkwọ Akara Asambodo, Mmezi arọ N'ihi Digital Akara, Mmezi Mass,